Nzira yekukunda kupera kwehukama ▷ ➡️
Maitiro ekuti upfuure kumagumo ehukama
Maitiro ekukunda kupera kwehukama. Kukunda kupera kwehukama hazvisi nyore, kunyanya kana isu takaparadzaniswa nemunhu watakagovana naye zviitiko zvedu nemanzwiro kwenguva yakareba. Muchokwadi, vanhu vazhinji vanopedzisira vaenda kuna chiremba wepfungwa nekuda kwechikonzero ichi. Nekudaro, kune matekinoroji anogona kukubatsira iwe kuita marwadzo wako wenguva dzose shamwari.
Tinofanira kunzwisisa izvozvo kurwadziwa kwacho hakuzoputi usiku hwese. Uyewo hatigoni kukurumidza kukanganwa munhu watakapedza nguva yakawanda naye. Zvisinei, tinofanira kudaro ziva kuti hatigone kunamira mune ino mamiriro, uye nekudaro, isu tinofanirwa kuita chikamu chedu kuti tifambe kuenda kumberi.
Saka kuti iwe udzidze ku pfuura kumagumo ehukama, isu tichaenda kukupa yakateedzana ye consejos izvo zvinokutendera kuti ubve zvishoma nezvishoma kubva mune ino inorwadza mamiriro. Nekudaro, sezvatataura pamusoro, zvakafanira kuti ita nesimba uye uve nemaonero akanaka.
1 Maitiro ekukunda kupera kwehukama nhanho nhanho
1.1 Chinja mafungiro ako
1.2 2. Tora matanho
2 6 matipi ekukunda kupera kwehukama
Maitiro ekukunda kupera kwehukama nhanho nhanho
Para pfuura kumagumo ehukama, tinofanirwa kutarisa pazvinhu zviviri zvakakosha:
Chinja mafungiro edu, pamwe nezviito zvedu, zvinoda kushanda nesimba kukuru, asi ndiyo chete nzira yekutarisana nekuguma kwehukama.
Tichatsanangura imwe neimwe yadzo pazasi.
Chinja mafungiro ako
Chinhu chekutanga chatinofanira shanduko ndiyo nzira yedu yekufunga. Kana pfungwa dzedu dzisina kunaka, dzinotikuvadza pane kutibatsira uye kuwedzera marwadzo edu.
ari pfungwa dzakaipa dzinoratidzwa nenzira dzakasiyana sei: Kufunga kuti hatife takawana mumwe munhu, kuti zvese zvave nekuda kwako, uchinzwa kuti watambisa nguva kana kunzwa kubiridzirwa, nezvimwe.
Aya marudzi epfungwa akajairika mune vanhu vazhinji vanoputsa hukama hwavo, zvakadaro hazvina kururama zvachose uye hazvina maturo, sezvo pasina ruzivo kurasa nguva uye pachagara paine munhu anoda kusangana newe uye kuti unomuziva.
Zvakajairikawo kufunga kuti mumwe wako akakosha zvekuti hauzowani mumwe akafanana. Nekudaro, iyi imwe imwe pfungwa yakaipa iyo isina chekuita nezvechokwadi. Kune mamirioni avanhu mukati nyika uye ese akakosha. Chinhu choga chaunoda iwe vhura pfungwa dzako nemoyo wako kuti uzive.
Pakupedzisira, tinokurudzira izvozvo usatange hukama mushure mekupedza imwesezvo zvinotora nguva kuporesa maronda nekukuvaka zvakare. Uye imwe nzira, marwadzo anogona kupedzisira ave kutonyanya.
2. Tora matanho
Kana iwe wasvika panguva ino uchibudirira uye wakakwanisa kuchinja nzira yako yekufunga, ikozvino zvakafanira kuti tora matanho uye tanga kuvaka zvakare. Kune izvi tinokurudzira kuti uzvibvunze mibvunzo inotevera:
Chii chauronga kuita kubva zvino zvichienda mberi?
Chii chaunoda kuita neremangwana rako?
Iwe unoda sei kuzvirangarira iwe mumamiriro ezvinhu aya? Iwe unoda kugara pamubhedha uchichema here kana iwe unofarira kuenda kunze uye kunakidzwa iwe?
Sokutaura kwakaita Albert Einstein: «Pakati pekuoma ndipo panowana mukana«. Izvi zvinoreva kuti Iwe unofanirwa kufunga nezve mikana iyo yawakarambana nemumwe wako inokupa iwe. Pasina kuenda kumberi, iwe unogona kuve uine yakawanda nguva yemahara, izvi zvinoreva kuti iwe unogona ita zvinhu zvawaida, asi hauna kumbowana nguva ye. Naizvozvo, inguva yekuzvisarudzira matambudziko matsva, kuzadzisa mapurojekiti ausina kupedza, kusangana nevanhu vatsva, kupedza nguva yakawanda uine mhuri yako neshamwari, kurovedza muviri, kudya zvine hutano, kuverenga zvakawanda kana kufamba.
Recuerda, que hukama uhu hausi hwega hwauchazove nahwo muhupenyu hwako. Naizvozvo, tinokurudzira, pamusoro pezvose, kuti unzwisise kuputsa uku se chiitiko kubva pane icho chekudzidza kugadzirisa hukama hwako mune ramangwana.
Takatsanangura izvo zvakakosha kuti iwe utange kuona zvaunofanirwa kuita kana iwe uchida kukunda kupera kwehukama. Iye zvino tava kuzokupa 6 tips kuti ikubatsire kuiwana.
6 matipi ekukunda kupera kwehukama
Matipi ekukunda kupera kwehukama
Usavanze zvaunonzwa. Kunyepedzera kuti uri kuita zvakanaka iwe usiri kunogona kukuvadza zvakanyanya.
Zviongorore zvako. Nguva zhinji, isu hatiite zviito zvatinoda nekuti hazvienderane nemumwe wako, nekudaro, zvibvumire iwe kuita zviitwa zvitsva uye kutora zvinhu zvawakaita pamberi pehukama hwako.
Funga uye ronga ramangwana rako. Tanga nezvinangwa zvakapusa nemabasa uye wozoenderera kune zvakakosha zvakanyanya.
Zvibate zvakanaka. Zvakajairika kuti munhu asazvitarisire paanenge achipedza kupera kwehukama. Zvisinei, kana iwe uchizvichengeta iwe pachako, kuvimba kwako kunowedzera.
Sangana nevanhu vatsva.
Wana rutsigiro kubva kushamwari uye mhuri.
Kana zvichidikanwa, vimba nerutsigiro rweunyanzvi.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi nezve kukunda sei kupera kwehukama yave ichikubatsira. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uri munguva yakanaka uye uchida kusangana nemunhu akakosha, tinokurudzira kuti iwe uverenge kukunda mukadzi anonetsa. Kusvikira nguva inotevera!
Ungawedzera sei kushamwaridzana kwako naMwari mumatanho mashanu
Nzira yekunamata kuna Mwari zvinoenderana neBhaibheri